Amaxabiso amatsha kwimarike yemasheya yaseSpain | Ezezimali
Mhlawumbi abatyali mali abaninzi abazi ukuba ezinye izinto zibonakala kwiimarike zezabelo ukuze bakwazi ukuqeshwa. Ezi ziziphakamiso zentengiso yesitokhwe ezingaziwayo, kodwa zinokusetyenziselwa ukwenza ukuba imisebenzi ibe yinzuzo, nangona kukho umngcipheko wokuba ukhuseleko sele lusekiwe kwimarike eqhubekayo. Unyaka ngamnye ngaphezulu kweenkampani ezilishumi zezi mpawu ziyavela kwaye zidityaniswe ngokubanzi kubizwa ngokuba Enye indlela yokuThengisa (MAB). Zidweliswe ngemali ephantsi kakhulu kwaye inokukhokelela ekwandiseni i-radar yokusebenza kwakho kwimarike yemasheya.
Yinkampani efuna kwiimarike zezemali iindlela zayo fumana imali ukuqhuba imigca yabo yeshishini. Ewe, azizizo iinkampani ezaziwayo kakhulu, nokuba zincinci kwaye ziphakathi abatyali mali kwaye oku kwenza ukuba kube nzima ukuba umthamo wentengiso ube mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungathathelwa ingqalelo ukusukela ngoku. Akumangalisi ukuba zimbalwa kakhulu izihloko ezitshintshisanayo ngesandla kwiiseshoni zentengiso yesitokhwe. Le nto ibangela ukungazinzi ekuguqulweni kwamaxabiso abo kugqithise ngokwenene.
Kwelinye icala, kunokubonwa ukuba umahluko phakathi kwabo ubuninzi kunye namaxabiso asezantsi zichaphazeleka kakhulu. Kwaye nakweyiphi na imeko, ngaphezulu koko kuboniswe ngamaxabiso aphambili ezabelo zamashishini ezingenanzala emiselweyo kuzwelonke Ngezihloko ezimbalwa kakhulu, amaxabiso anokuqhutywa kwelinye icala kwaye kwelinye ilizwe kunokuthiwa amaxabiso anokulawulwa ngakumbi zizandla ezomeleleyo zeemarike zezemali. Ke ngoko, alithandabuzeki elokuba umngcipheko ugcwele ngakumbi kwaye kufuneka uthathe unonophelo olukhethekileyo kutyalo-mali lwezi asethi zemali. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobuchwephesha nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 Amaxabiso kwi-MAB
2 Amaxabiso amatsha: Inkunzi yeAlmagro
3 U-Euripo uqala ukurhweba
4 Ukongezwa okungakumbi kwi-MAB
5 Ubudlelwane nee-asethi eziyimali
6 Izivumelwano ezivela kwezinye
7 Ukusebenza kakuhle kwe-MARF
Inxalenye elungileyo yoku kubonakala kwintengiso ye-equity yenzeka kwiNtengiso yeNtengiso yeStock, eyaziwa njengeMAB. Kulapho amaxabiso oonobumba abaphantsi Kwaye kuyo nayiphi na imeko ibhekisa kwiinkampani ezincinci kakhulu ezifuna ukuzixhasa ngezemali kwiimarike zezemali. Amagama abo aya kuba matsha kuwe kwaye nkqu nabatyali mali abanamava kwiimarike zezemali. Kungenxa yokuba bebekule meko ixesha elifutshane kakhulu. Ngamanye amagama, zidwelisiwe kwiimarike ezizezinye ze-equity kwaye ke azaziwa kakuhle phakathi kweearhente ezahlukeneyo zezemali. Kodwa kunokuba ngokuchaseneyo.
Kwelinye icala, babonakaliswa iminqamlezo kumaxabiso abo aziphakamanga njengakumaxabiso aqhelekileyo. Banokusikwa ngexesha leseshoni yorhwebo apho amaxabiso abekiweyo. Oku kuyenziwa kuthetha ukuba kunzima ngakumbi ukusebenza nabo nakweyiphi na indawo yokujonga. Esi sesinye seziphazamiso ekufuneka ujongane nazo ngezi zenzo zikhethekileyo. Umahluko omkhulu oya kuthi uthathelwe ingqalelo.
Amaxabiso amatsha: Inkunzi yeAlmagro
IBhodi yabaLawuli be-MAB ikuvumile ukubandakanywa kwenkampani iAlmagro Capital Socimi emva kokuhlalutya ulwazi olunikezwe yinkampani kwaye kanye emva ingxelo yovavanyo iyathandeka kwiKomiti yoLungelelwaniso kunye neeNkampani. Ukuqala kothethathethwano lwenkampani kwenzeka nge-16 kaJanuwari. Ikhowudi yokuthengisa yenkampani iya kuba "YAC1". IRenta 4 Corporate, SA nguMcebisi obhalisiweyo wenkampani kwaye iRenta 4 Banco, SA iya kusebenza njengoMboneleli woTywala.
Ibhodi yabalawuli benkampani isete Ixabiso lesalathiso Kwisabelo ngasinye kwizabelo zayo ze-1,07, ezimele ixabiso elipheleleyo lenkampani ye-10 yezigidi ze-euro. Ngayiphi na imeko, lukhuseleko olunqabileyo oluncinci olubandakanya imisebenzi enobungozi, ubuncinci okomzuzwana kuba ayinayo imvelaphi yembali yokwenza uthelekiso oluthembekileyo. Kwangokunjalo, ayinalo ixabiso ekujoliswe kulo lokuyithatha njengesixhobo sokujonga ukusebenza kwayo kwiimarike zezabelo.
U-Euripo uqala ukurhweba
Ibhodi yabalawuli be-MAB ikwamkele ukufakwa kwenkampani i-Euripo Properties Socimi emva kokuhlalutya ulwazi olunikezwe yinkampani kwaye yakuba ingxelo entle yovavanyo kunye nekomiti yokudibanisa ikhutshiwe. Ukuqala kothethathethwano lwenkampani kwenzeka kwiintsuku zokuqala zonyaka omtsha.
Kwelinye icala, ikhowudi yokurhweba yenkampani iya kuba yi "YEPS", kwaye ikhontrakthi yayo iya kwenziwa ngenkqubo yamaxabiso. "Ukulungisa". IRenta 4 Corporate ngumcebisi obhalisiweyo kwaye iRenta 4 Banco iya kusebenza njengomboneleli ngemali. Ibhodi yabalawuli benkampani isete ixabiso lesalathiso kwisabelo ngasinye sayo 22 euro, emele ixabiso lilonke lenkampani ye-110 yezigidi zeerandi.
Ukongezwa okungakumbi kwi-MAB
Ibhodi yabalawuli be-MAB ikuvumile ukubandakanywa kwintengiso yeRent kunye neLiving emva kokuhlalutya ulwazi olunikezwe yinkampani kunye nengxelo yovavanyo elungileyo ulungelelwaniso kunye nokubandakanywa. Ukuqala kothethathethwano kwenzeke kwiintsuku zokugqibela zonyaka ophelileyo. Ngolu kongezwa, inani le-Socimis elamkelweyo kurhwebo kwi-MAB kwi-2018 ifikelela kwi-20, idibanisa ukuya kuthi ga kwiinkampani ezingama-64. Ngeenkampani ezi-5 ezidweliswe kwi-Stock Exchange, inani elipheleleyo le-Socimis limi kuma-69.
Ikhowudi yothethathethwano yokuqeshisa iya kuba yi- "YARP"; kunye neVivenio, "YVIV". Ukwenza ikhontrakthi kwezi nkampani zombini kuyakwenziwa ngenkqubo yokumisa amaxabiso. Kwelinye icala, iRenta 4 Corporate ngumcebisi obhalisiweyo kwaye iRenta 4 Banco isebenza njengomboneleli wemali kwimeko ezimbini ezichaziweyo. Ngelixa ngokuchaseneyo, ixabiso lesalathiso kwisabelo ngasinye se-Arrienda labekwa kwii-euro ezingama-2,74, zizisa ixabiso lenkampani kwizigidi ezingama-56,4 zeerandi. Kwelinye icala, iVivenio iseke ixabiso ngesabelo ngasinye kwi-1,15 euro, emele ixabiso elipheleleyo le-329,4 yezigidi ze-euro.
Ubudlelwane nee-asethi eziyimali
Imarike yemasheya yaseSpain ithengise i-587.479 yezigidi zeerandi kwii-equities kwi-2018 emva kokubhalisa i-38.768 yezigidi zeerandi ngoDisemba, i-5,4% ingaphantsi kweyeNkanga kunye ne-18,7% engaphantsi kwenyanga enye yonyaka ophelileyo. Inkqubo ye- inani lothethathethwano yenyanga yayizizigidi ezi-3,1, i-15,8% ingaphantsi kwenyanga ephelileyo kunye ne-5,7% ingaphantsi kweyoMnga yowama-2017. Kwicandelo lama-Warrants kunye neziQinisekiso, i-41,3 yezigidi zeerandi zathengiswa ngoDisemba ka-2018, i-16,9% ingaphantsi kwenyanga edlulileyo kunye ne-44,6% ngaphezulu kunoko kweyoMnga yowama-2017. Inani leengxoxo belimi kuma-7.059, i-11,5% ngaphantsi kunangoNovemba ne-12,4% ngaphezulu kwenyanga efanayo yonyaka ongaphambili. Inani lemicimbi eyamkelweyo kurhwebo ngoDisemba laya kuthi ga kwi-5.173, i-9% engaphantsi kunonyaka ophelileyo.
Kwisahlulo seNgxowa-mali yokuThengiswa kweeNgxowa-mali (i-ETF), i-181,4 yezigidi zeerandi zathengiswa, i-22,7% ingaphantsi kwenyanga ephelileyo kunye ne-39,4% ngaphantsi kwenyanga enye yonyaka ophelileyo. Inani lothethathethwano belingama-6.628, 42,8, ama-12,1% ngaphezulu kunangoNovemba ne-XNUMX% ngaphezulu kwenyanga efanayo yonyaka ongaphambili. Intengiso ye Iziphumo zezemali wagxothwa u-2018 ngexabiso elithengisiweyo elithengisiweyo nge-683.243 yezigidi ze-euro. Kubone ukurhweba kwicandelo lexesha elizayo kwi-IBEX 1,2 inyuka nge-35% kunyaka uphela, ngelixa uKhetho kwisalathiso sivelise i-2,8%, emva kokuphuculwa nge-16,6% kwinyanga ephelileyo ye-anus.
Izivumelwano ezivela kwezinye
Ukurhweba ngezivumelwano eziphuma kwimveliso ezinxulumene nokubiyela umngcipheko wezabelo ezibhalise ukwanda kwama-63,1% kwi Ixesha elizayo kwi-IBEX Impembelelo yolwahlulo. Ukhetho lwesitokhwe lulwandisile urhwebo lwalo ngenyanga nge-94,1% (+ 36,2% xa kuthelekiswa kwinyanga enye ka-2017), laza luvale unyaka ngokuhambelana no-2017. Indawo evulekileyo yeemarike ze-BME's Financial Derivatives yagxotha uDisemba 2,3% ngaphezulu kwenqanaba kwinyanga ephelileyo. Izinketho kwi-IBEX 35 zonyuse indawo yazo evulekileyo nge-13,8% kunye neenketho zeSitokhwe nge-4,3%.
Malunga ne ingeniso, umthamo othengisiweyo ngonyaka wawungama-200.757 ezigidi zeerandi, i-45,1% ngaphezulu kunonyaka ophelileyo. Ukufunyanwa kwabantu ngoDisemba kunyuke ngama-38,4% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka odlulileyo ngenxa yokuqeshwa kwempahla zikarhulumente zelizwe jikelele nakwamanye amazwe.
Ukusebenza kakuhle kwe-MARF
Isixa se imiba emitsha kuluhlu lokurhweba nge-MARF ngoDisemba kufikelelwe kwizigidi ezingama-671 zeerandi, nto leyo ebonisa ukwanda kwe-226% xa kuthelekiswa nelo xesha linye ngo-2017. Umthamo obalaseleyo osasazwayo kule marike ufikelele kwi-2018 yezigidi zeerandi, nto leyo ebonisa ukukhula kwe-6.357% ngonyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukhuseleko olutsha kwimarike yaseSpain